Tsy mety raha mpaminany ka vonoina...
Alakamisy 29 ôktôbra 2020 — Herinandro faha-30 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 13, 31-35 — Niantso antsika tamin’ny alalan’ny Evanjely Andriamanitra, mba hahazoantsika ny voninahitr’i Jesoa Kristy Tompontsika.
Lohahevitra : Radio Don Bosco
Naseho ny : 25 novambra 2019
Firafitry ny fandaharana
Pejy 1 amin'ny 3
Fampahalalana ny Radio Don Bosco
Radio mahaleo tena, mpanabe, manaraka ny foto-pinoana Katôlika, ary tsy manana tanjona pôlitika na filàm-bola, ny Radio Don Bosco. Ny filamatra kristianina sy ny fampianaran'ny Fiangonana no entiny manampy ny olona hivoatra sy hihalavorary amin'ny maha-olona sy maha-kristianina azy, ary amin'ny fomba manokana, ny tanoran'i Madagasikara.
Radio Tsy manavaka na iza na iza ny Radio Don Bosco. Miteny ho an'ny olon-drehetra, indrindra ho an'ny tanora satria tanora rahateo koa no manao azy. Na inona na inona kanto sy mahasoa eto Madagasikara dia aelin'i Radio Don Bosco.
Feo miara-dàlana amin'ny olon-drehetra ny Radio Don Bosco:
na ao an-tokantrano na an-dàlambe;
maraina hatramin'ny hariva; mandritra ny alina ihany koa;
an-tanàn-dehibe sy ny manodidina azy,
any amin'ny tanàna sy vohitra mitsitokotoko eny ambanivohitra;
feo tsy mandao fa eo anila mandrakariva, indrindra ho an'ireo izay manirery, marary, saraka lavitra ny olon-tiany.
Radio mahatehotia manolotra ho anao:
mozika, tantara, kolotsaina,
vaovao, fialamboly, fanatanjahantena,
mitondra ny feon'ny:
ny mahantra sy ny madinika.